हिमाल खबरपत्रिका | खुलेको फैलिएको दशैं
पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनका कारण दशैंको स्वरुप फेरिंदा यसको मूल्य कम भए जस्तो देखिए पनि मोल भने बढिरहेको छ।
सबै कुरामा व्यापक परिवर्तन भएको छ भने दशैं मात्र कसरी उस्तै रहन्छ र ? दिन, समाज, संसार कहिल्यै पनि उस्तै रहँदैन भन्ने कुरा बुझदा बुझदै पनि हामी कहिलेकाहीं भनिहाल्छौं, “कठै ती दिन गैगए !”
तर दशैं मात्र होइन, अरू र अन्तका चाडबाड पनि फेरिएका छन् । संसारभरमा सबै कुराको परिवर्तनको गति बढेको छ । हामी पहिले कहिल्यै कल्पना समेत नगरिएका अनेक कुरा आत्मसात् गर्दैछौं र आफूलाई सजिला, रमाइला र महŒवपूर्ण नलागेका कुरा छाड्दै जाँदैछौं । आउँदा दिनहरूमा यो परिवर्तनको गति अझ् बढ्नेछ ।
दशैंका पनि धेरै कुरा हामीले छाडेका छौं र कतिपय नयाँ कुरा ल्याएर दशैंमा टाँसेका छौं । त्यसैले दशैं पुरानो गोरेटो छाडेर सडकको बाटो हिंड्न थालेको छ । गोरेटोबाट सडकतिर लाग्नासाथ साधन फेरिन्छ र फेरिन्छ, गति पनि । दशैंको पनि गति फेरिएको छ । पहिले दशैं पैदल आउँथ्यो, अहिले नानाथरी साधन चढेर आउँछ ।
दशैंले अब परम्परागत हिसाबले दशैं नमनाउने क्षेत्र र समुदायहरूलाई पनि समेट्न थालेको छ । अब यो हिन्दूहरूको मात्र चाड रहेन, होइन । मुख्य रूपमा यो धार्मिक भन्दा बढी सांस्कृतिक चाड हुँदै गएको छ । दोस्रो, सञ्चारमाध्यमहरूको विस्तार र प्रभावका कारण ‘सांस्कृतिक मूलप्रवाहीकरण’ पनि बढ्दो छ । तेस्रो, यो नेपालको सबभन्दा ठूलो आर्थिक गतिविधि हुने अवसर भएकाले यसले उद्यमी र व्यापारीहरूलाई सम्भवतः सबभन्दा धेरै छुन्छ । र, व्यापारीहरू सबै धर्म र समुदायका हुन्छन् ।
मान्छेहरूको आवतजावत, आवधिक बसाइँसराइ र सञ्चारमाध्यमहरूका कारण हुने सांस्कृतिक मूलप्रवाहीकरणले दशैंमा आएको हेरफेर सम्बन्धित विषयका अध्येताहरूका लागि एकदमै चाखलाग्दो विषय हुनसक्छ । यसका अनेक मध्ये एउटा उदाहरण हुम्लाको दशैं पनि हो । परिवर्तनको पारा हेर्ने हो भने सम्भवतः सबभन्दा फेरिएको दशैं हुम्लाकै हो, जहाँ केही वर्ष अघिसम्म, अरूतिर दशैंको मुख्य विशेषता मानिने टीका लगाउने चलन थिएन । त्यहाँ टीकाका दिन सानाले ठूलालाई र ठूलाले सानालाई जमरा लगाइदिएर आसिक दिन्छन् ।
हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका जैरका नरबहादुर सुनुवार बताउँछन्, “पढ्न र काम गर्न गएका मान्छेले जहाँ जे देखे त्यहाँबाट त्यही चलन ल्याए । अहिले हामी टीका पनि लगाउन थालेका छौं ।” सुनुवारका अनुसार, बरु जुटेन भने मासु नखाँदा पनि ठूलो गुनासो हुन्न, दशैंमा भात भने चामलकै खानुपर्छ भन्ने सबैको चाहना हुन्छ । उनी भन्छन्, “हामीकहाँ दशैंको मिष्ठान्न भनेको चिउला (पुरी जस्तो परिकार) थियो, अब सेलरोटीको प्रवेश हुँदैछ ।”
अदानचुली गाउँपालिका, श्रीनगरका देउलु रोकाया हुम्लाको दशैंको चलनलाई अलि विस्तार गर्दै भन्छन्, “दलितहरूले चोखा भनिएकाहरूलाई आफूले बनाएका कुराको जमरा लगाइदिन्छन् । जस्तो, सुनारहरूले आफूले बनाएको सियो वा सार्कीहरूले छालाको फिर्का (चर्खा चलाउँदा काममा आउने सामान) को ‘जमरा’ अर्थात् कोसेली दिन्छन् । दमाईहरू भने घटस्थापनाका दिनदेखि अष्टमीसम्म ‘चोखा’ हरूकहाँ गएर बाजा बजाउँछन् । त्यसबेला उनीहरूको खानपिनको व्यवस्था ‘चोखा’ हरूले नै मिलाउँछन् ।”
तर दशैं यसरी फैलिएको मात्र होइन, खुम्चिएको पनि छ । परम्परागत हिसाबले दशैं मानिआएका समुदायहरूबाट दशैं बाहिरिएका उदाहरण पनि छन् । “हामी साह्रै राम्ररी पो दशैं तिहार मनाउँथ्यौं त ! हामी दशैंको टीका औंसी (गाईतिहारे औंसी) सम्म र तिहारको टीका पञ्चमीसम्म लगाउँथ्यौं । दशैं आउनुभन्दा दुई–तीन महीना अघिदेखि नयाँ लुगा जुटाउने र सिलाउने चटारो हुन्थ्यो”, पाँचथर जोरपोखरीका कर्णश्याम लावती (४४) भन्छन् । उनी आफू सानो छँदा खुङपाङ, चुकफारा तिरबाट कपास ल्याई घरमै धागो कातेर आमाले खाँडीको कपडा बनाइदिएको सम्झ्न्छिन् ।
सडक नआउँदासम्म यहाँका बासिन्दा लुगाफाटो किन्न पाँचथरबाट तीन दिन हिंडेर दार्जीलिङको पुलबजार वा तमोर गढतिरको बाटो धरान वा इलाम जान्थे । २०४४ सालदेखि मात्र यहाँ गाडी चल्न थालेको हो । “अहिले जति लाए पनि लुगा छ, रोजीछाडी खानेकुरा छ, तर दशैं छैन”, लावती थप्छन्, “२०४७ पछि यसमा राजनीति छिर्‍यो । दशैं हाम्रो होइन भनेर नमनाउने सल्लाह भयो । अनि मनाउन छाडियो । अरू कुरा त त्यस्तै हो, बाउबाजेले दिने आसिक चाहिं साह्रै मनपर्थ्यो, त्यो सम्झिदा चाहिं मनै कटक्क खान्छ । ठूलाबडाको आशीर्वाद लिने–दिने चलन नै हरायो, हितेरी मितेरी पनि हरायो ।”
नुहाउँदा केश नझ्रोस्, हिंड्दा ठेस नलागोस्
पर्सा विश्रामपुरका मुसलमान समुदायका इब्राहिम देवान भने आफू सधैं ‘दशैं भित्रै’ रहेको अनुभव गर्छन् । “हामी साना छँदा नवरात्रिमा बोक्सी र भूतप्रेतको गतिविधि बढ्छ भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो र हामीलाई बुवाआमाहरूले शिरमा कुनै कपडा बाँधेर मात्र निस्कन दिनुहुन्थ्यो । हामी हिन्दूहरूकहाँ जाने, नाचगानमा भाग लिने, रमाउने सबै गथ्र्यौं । तर, त्यसबेला समाजमा अलि भेदभाव थियो, अहिले मेटिंदै गएको छ । हामी हिन्दू परिवारहरूमा निम्त्याइन्छौं । खानपान गर्ने मात्र होइन, टीका पनि लगाउँछौं ।”
पर्साबाट अति टाढा गोरखाका मुसलमानहरू भने टीका लगाउँदैनन् । पत्रकार अब्दुल्लाह मियाँ भन्छन्, “म सानो छँदा समाजमा कुनै भेदभाव थिएन । हामी फरक समुदायका हौं भन्ने एकदमै कम मात्र अनुभव हुन्थ्यो । दशैंमा जति पनि किसिमका पीङ हालिन्थे, सबै मुसलमानहरूको अग्रसरतामा, मुसलमान गाउँतिरै हालिन्थे । किनभने त्यसबेला हाम्रा बुवा दाजुहरू अरू भन्दा अलि बढी फुर्सदमा हुनुहुन्थ्यो । हामी हिन्दूहरूकहाँ जान्थ्यौं र घरभित्रै बसेर खानपिन गथ्र्यौं । उनीहरूकहाँ पाकेको मासु खाने र टीका लगाउने बाहेक उनीहरू जसरी नै दशैंमा रमाउँथ्यौं ।”
दोलखा जिरीका पूर्व शिक्षक टेकबहादुर जिरेल (६३) लाई दशैं हिन्दूको चाड भनेकै मन पर्दैन । जिरेलहरू लामो समयदेखि बौद्धधर्म मान्छन् । तर, आफ्नो बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म दशैं उनका लागि उत्तिकै प्रिय छ । पहिले–पहिले उनीहरू पनि रातो रङमा मुछेको दही अक्षताको टीका लगाउँथे । त्यसबेला ‘दशैं अर्काबाट सिकेको, परधर्मी चाड’ भन्ने कुरा निकै उठ्यो । अहिले उनी दशैंको आफ्नो मौलिकतामा फर्केर, पितापुर्खाले जस्तै रङ नहालेको, दही चामलको टीका लगाउँछन् । उनलाई दशैं आदर प्रकट गर्ने, आशीर्वाद थाप्ने र शुभकामना आदानप्रदान गर्ने सबभन्दा उम्दा उत्सव लाग्छ । (हे. बक्स हाम्रो दशैं)
केही वर्ष यता टीका लगाउन छाडेका इलाम आइतबारेका मार्कुस राई टीका नलगाए पनि दशैंभर दशैंमय दिन बिताउँछन् । छरछिमेकमा खसी, सुँगुर ‘बनाइदिने’ काममा उनकै सीपको खोजी हुन्छ । मार्कुस र मनुले छोरी करुणालाई नयाँ लुगा किनिदिइसकेका छन् । करुणा जस्तै नयाँ लुगा लगाएका धेरै बालबालिका बाबुआमा सहित आफन्तहरूलाई भेट्न र रमाइलो गर्न जान्छन् । कतिपय चर्चहरूमा जुनसुकै बार परे पनि टीकाकै दिन भेटघाट, प्रार्थना र सहभोज हुन्छ ।
गैरहिन्दू दशैंको एउटा विशिष्ट परम्परा रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका उत्तरी गाउँहरूमा पाइन्छ । “दशैंका बेला देशभर हुने गरेको काटमारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पाप नलागोस् भनेर हामी दशैंको फूलपातीदेखि दशमीसम्म गुम्बामा गएर ङ्युङ्ने अर्थात् उपवास बस्ने, पूजा गर्ने र प्रसाद बाँड्ने काम गर्छौं”, पाँचपोखरी क्षेत्रको रिपार गाउँका तासी लामा (५०) भन्छन् । सेर्माथाङ, गोरखनाथ गुठी गुम्बाका छेसाङ लामा (५३) का अनुसार, घरघरबाट एक दुई जना गुम्बामा आएर संलग्न हुने यस अनुष्ठानमा फूलपातीका दिनदेखि नवमीसम्म मौनब्रत र निराहारब्रत हुन्छ । दशमीका दिन मनिबुम पूजा गरेर प्रसाद बाँडेपछि ङ्यूङ्ने सकिन्छ । त्यसैदिन गुम्बामा अर्को दशमीसम्मका लागि ‘मार्खु घ्याम्झे’ (घ्यूको दियोको समुद्र) प्रज्वलन गरिन्छ । (हे., पृष्ठ ३२)
नवरात्रिमा हिन्दूहरूले गर्ने दुर्गा भवानीको पूजा आराधनाको निश्चित विधिविधान हुन्छ, तर दशैंको कुनै विधान छैन । टीका लगाउनेले दशमीका दिन जसरी टीका लगाइदिए पनि हुन्छ । एकदिनदेखि जति दिन पनि टीका लगाए हुन्छ । टीका नै नलगाए पनि हुन्छ । दशैं पारिवारिकता, मित्रता, उमङ्ग र लचिलोपनको पर्व हो, टीका, जमरा, नयाँ लुगा, मासु, केरा वा अन्य सबै कुरा तपसिलका हुन् ।
आजभन्दा पचास वर्ष अघिको समाज सम्झैं, र विचार गरौं, हामीसित त्यसबेला के के थिए –
त्यसबेलासम्म मान्छेका सन्तान धेरै हुन्थे । झैझ्गडा नपरुञ्जेल परिवार संयुक्त रहन्थे । धेरथोर खेतीपाती प्रायः सबैको हुन्थ्यो र त्यो पनि नहुनेहरू अर्काका घरमा सस्तोमा श्रम बेच्थे । घरका सदस्यहरूको अथक् र मूल्याङ्कन नगरिने श्रम र सस्ता खेतालाका भरमा धेरैका भकारीमा अन्न भरिन्थ्यो र त्यसलाई आत्मनिर्भरता भनिन्थ्यो । वास्तवमा जो श्रम गर्न सक्थे, तीमध्ये धेरैसित गरिखाने जमीन हुँदैनथ्यो र जोसित प्रशस्त जमीन हुन्थ्यो, प्रायः ती श्रम गर्दैनथे ।
उसबेला हरेक मान्छेको दशैं फरक–फरक किसिमले आउँथ्यो । बा–काका, दाजुहरूको दशैं रामरउस गर्ने, फुर्सदमा दुईचार हात तास पनि खेल्न भ्याउने खालको हुन्थ्यो भने आमा, काकी, भाउजूहरूको दशैं भने मड्केनाबाट माटाको भारीसहित निस्केर घरमा पस्थ्यो । रातोमाटो, कमेरो, गोबर र मोसो – घर पोत्ने काम मूलतः आमाहरूकै हुन्थ्यो । आमाहरू थाकेको हामी थाहा पाउँदैनथ्यौं । सम्भवतः उहाँहरूसित पनि आफू थाकेको कुरा थाहा पाउने पुगिसरी थिएन । ढिकीको काममा पुच्छ«ामा लाग्ने लाठेहरू त हुन्थे, तर आफैं समेत लागेर कहिले ओख्लामा, कहिले पुच्छ«ामा नाचीनाची काम गर्नुहुन्थ्यो । एक मुरी, पच्चीस पाथीसम्म चिउरा कुट्न बिहान ३–४ बजेदेखि नै ढिकीमा खट्नुहुन्थ्यो ।
सबै कामबाट फुर्सद निकाल्न सके दशैंको हाट भर्न बजार जाने छूट र टीकाका भोलि–पर्सिपल्ट माइत जाने छुट्टी मिल्थ्यो, त्यो पनि सासूले तोकेका दिनसम्मका लागि मात्र । घरहरूको ढाँचा पुरानो थियो । धेरै सन्तान पाएर बैंसमै बुढिएका महिलाहरू दिनको १४ देखि १८ घन्टा अथक् श्रम गर्थे । आज उहिलेको घरमा भर्खर पोतेको रातोमाटो र कमेरोको सुगन्ध खोज्ने नाकहरूले आफ्ना आमा हजुरआमालाई सोधे हुन्छ, दशैं त्यसबेला कति कठिन थियो । अहिले आमा वा हजुरआमा पुस्तामा रहेका ती महिलाहरूका लागि दशैं मरुञ्जेल काम गरेर डराई–डराई केही दिन माइत जान पाउने अवसर मात्र थियो ।
जब म दशैंलाई ‘र पो दशैं आएझैं लाग्थ्यो’ को अतीत मोहबाट निस्केर, मान्छेको सुखदुःखका दृष्टिबाट हेर्छु, मलाई अहिलेकै दशैं मनपर्छ । अहिले अनिच्छित गर्भधारणबाट मुक्तिको एउटै वरदानले महिलालाई ‘मान्छे’ हुन मद्दत गरेको छ । संयुक्त परिवारहरूको विघटनले सबैको, खासगरी महिलाहरूको इच्छा र चाहनालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने बाटो खोलेको छ । फोन, सडक र झेलुङ्गे पुलहरूले माइती–मावलीको दूरी र दुर्गमता घटाएका छन् । घरमा सिमेन्ट, जस्तापाता, पोलिथिन पाइप आदिको प्रयोगले महिलाको श्रम उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । चीनबाट आउने सस्ता तयारी लुगाले लुगा फेर्न दशैं नपर्खिनुपर्ने भएको छ । एलपी ग्यासले त दाउरा खोज्ने, बोक्ने, चुलो फुक्ने र आँसु बगाउँदै खोक्नेसम्मका काम घटाएको छ । बजारहरू नजिक सरेका छन्, सडकहरू तन्केका छन्, बिजुली बत्ती चम्केका छन् । चाहिए जति चिउरा र पीठो सरक्क किन्न पाइन थालेको छ । टेलिभिजनमा देखेजस्तो संसारको कल्पना गर्ने अधिकार सबैलाई प्राप्त भएको छ । हिजो ६ महीना प्रौढशिक्षा कक्षामा धाएर कखरा चिन्ने आमाका छोरीहरू कुनै तालीम विना फेसबूकमा सेल्फी अपलोड गर्न सक्ने भएका छन् ।
उसबेला हरेक मान्छेको दशैं फरक फरक किसिमले आउँथ्यो, अहिले सबैको दशैं लगभग उस्तै किसिमले आउँछ, त्यसैले मलाई अहिलेको दशैं मनपर्छ । अहिले नेपाली मध्यमवर्गमा पनि दशैंमा घुमफिर गर्ने चलन शुरू भइसकेको छ । लोग्नेमान्छे पनि घरको काममा सघाउँछन् । परिवारका सबै मिलेर तास खेल्छन्, फिल्म हेर्न जान्छन् । अब सबैले खाइसकेपछिको भाँडो चाटेर मध्यरातमा घरधन्दा सक्न कुनै बुहारीलाई कर छैन ।
सानो छँदा कुनै जिम्मेवारी विना चाड मनाउँदाका मीठा स्मृतिहरू सबैलाई प्यारा हुन्छन्, तर हुर्किएपछि, विवेकका आँखाबाट हेर्दा ती सबै कुरा रमाइला नहुन सक्छन् । अहिलेका बालबालिका पनि बीस वर्षपछि त्यसबेलाको दशैं भनेर अहिलेको दशैंको बयान गर्दै रमाइरहेका हुनसक्छन् । त्यसैले पनि दशैं पहिले जस्तो भएन भनेर दुःखमनाउ गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
सबै कुरा जस्तै दशैं पनि फेरिएको छ र अझ् फेरिंदै जान्छ । यसले गोरेटो छोडेर सडक जो समातेको छ ! चाँडै दशैंले रेल वा मेट्रोको लिक पनि समात्न सक्छ, हामी तयार भइरहनुपर्छ !
... र पो दशैं आएझैं लाग्थ्यो
खरले छाएको, रातोमाटाले लिपेको घरमा माकुराले लगाएको जालो पन्छाउँदै घर पोत्ने चटारो हुन्थो र पो दशैं आएझैं लाग्थ्यो ।
दशैंलाई भन्दै साँचेर राखेको काँक्रो थाङ्ग्रामै पाकेर पट्पटी फुट्थ्यो र पो दशैं आएझैं लाग्थ्यो ।
लिङ्गे पीङको डोरी बाट्न पाट–बाबियो उठाउँदै हिंडिन्थ्यो र पो दशैं आएझैं लाग्थ्यो ।
दशैंलाई भन्दै टेको लगाएर राखेको केरा बोटमै पहेंलपुर हुन्थ्यो र पो दशैं आएझैं लाग्थ्यो ।
दशैंलाई भन्दै गाउँघरका बाटोघाटो सरसफाइमा जुटिन्थ्यो र पो दशैं आएझैं लाग्थ्यो ।
दशैंलाई भन्दै चिउरा कुट्न रातभरि गाउँका ढिकी भक्र्याङ्च्याङ् भक्र्याङ्च्याङ् गर्थे र पो दशैं आएझैं लाग्थ्यो ।
दशैंमा फलानो आयो ढिस्कानो फलानो आयो रे, फलानो आउँदैन रे भनेर कुरा हुन्थ्यो र पो दशैं आएझैं लाग्थ्यो ।
पोहोरको दशैंमा यति दक्षिणा भा’थ्यो अहिले कति हुने हो भनेर मनमनै हिसाबकिताब गरिन्थ्यो र पो दशैं आएझैं लाग्थ्यो ।
वर्ष कुरेर बल्लबल्ल नयाँ लुगा आङमा पर्दा पो दशैं आएझैं लाग्थ्यो ।
अघिपछि दुई चोक्टा मासुसँग कचौराभरि झोल खाने बानी परेको मान्छेलाई आनै घरमा सिङ्गै खसी ढाल्दा पो दशैं आएझैं लाग्थ्यो ।
मुग्लानेहरू हरर्र अत्तर वास आउँदै भरियालाई भारी बोकाएर खाङ्ग्रे डोकोमा सामान हालेर टेप रेकर्डर घन्काउँदै गाउँ छिर्थे र पो दशैं आएझैं लाग्थ्यो ।
सधैं निख्लो ढिंडो मकैको भात पाक्ने अँगेनामा एक्कासी धानको भात पाक्दा अचम्म लाग्थ्यो र पो दशैं आएझैं लाग्थ्यो ।
टेकबहादुर जिरेल, पूर्व शिक्षक
मैले थाहा पाउँदा जिरी (दोलखा) संसारको केन्द्रविन्दु थियो । तिब्बतीहरू हाम्रो गाउँको बाटो भएर ओहोरदोहोर गर्थे । सगरमाथा क्षेत्रतिर जाने गोराहरू पनि लावालस्करसाथ हिंड्थे । तिनलाई र स्विस प्रोजेक्टमा आएका विदेशी देख्दा चाहिं संसार फराकिलै छ कि भन्ने लाग्न थालेको थियो । तर पनि तामे, शेर्दुङ र हनुमन्ते लेकहरू पारिको देश–दुनियाँको कल्पना समेत आउँदैनथ्यो ।
हाम्रा लागि लत्ताकपडा त्यसबेलाको नेपाल, अहिलेको काठमाडौंबाट आउँथ्यो । त्यसैले नयाँ लुगा दुर्लभ हुन्थ्यो । र पनि दशैंमा खेस (एक प्रकारको बाक्लो खाँडी) का दौरा–सुरुवाल भने पाइन्थ्यो । जुत्ता भने मैले १३/१४ वर्षको उमेरमा मात्र लगाएको हुँ । न्वागी खाने पूजा, उँधौली–उभौलीका बेला हुने कुलपूजा, माघे सङ्क्रान्ति, साउने सङ्क्रान्ति, चैते दशैंहरू नै हाम्रा चाडबाड थिए । दशैं–तिहारको भने कुरै बेग्लै । हामी त्यसबेला जति खुशी कहिल्यै हुँदैनथ्यौं । नयाँ नाना, जुटेसम्मका मीठा खाना, गानाबजाना । माथि नीलो आकाश, तल सयपत्री र गोदावरीको सौन्दर्य । दशैं सबै कुराले स्वादको हुन्थ्यो । दशैं हाम्रो चाड थियो । यो चाड अरूले पनि मनाउँछन् भन्ने हामीलाई थाहा थिएन । तर, पछि पढ्दै–बढ्दै गएपछि पाठ्यपुस्तक र सञ्चारमाध्यममा ‘हिन्दू मात्रको महान् चाड’ भनेको पढे–सुनेपछि चाहिं तीतो लाग्यो । तर, त्यो तीतो लागेको दशैं र तिहारप्रति हुँदै होइन । बरू हाम्रोपन र हाम्रो भावना नबुझी दशैंलाई कित्ताबन्द गरिदिनेहरूप्रति हो । ममा रहेको दशैंप्रतिको अनुराग र श्रद्धा सधैं उस्तै रहिरह्यो ।
हरेक कुराको शुरूआत विन्दु हुन्छ । तर, हामी शुरूका प्रकृतिपूजक र पछिका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको समाजमा कहाँ, कहिलेदेखि र कसरी दशैं मनाउन थालियो होला भन्ने कुराको मैले कुनै भेउ पाएको छैन । मान्छे अझ पनि रातो अक्षता कि सेतो अक्षता भन्नेमा अल्मलिइरहेका छन्, मैले भने संसारमा अन्त कतै नभएको चामलका अक्षताको टीका लगाउने चलन नेपालमा कहिले र कसरी शुरू भयो होला भन्ने बारेमा कतै पढ्न पाएको छैन । दशैं आर्य र हिन्दूहरूको चाड हो भने हाम्रोभन्दा ठूलो हिन्दू जनसंख्या भएको भारतमा दशैं किन हाम्रो जसरी मनाइँदैन, मलाई त्यो पनि थाहा छैन । कहिलेकाहीं त लाग्छ, यो नेपाली जातीय चाडलाई पछि मात्र धार्मिक रङ दिइएको त होइन ?